Fanekem-pinoana nikeana - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fanekem-pinoan'i Nikea sy Konstantinoply)
Ny Fanekem-pinoan' i Nikea na Fanekem-pinoana nikeana na Fiekem-pinoan' i Nisea na Fiekem-pinoana niseana dia fanekem-pinoana na fanambaràm-pinoana kristiana tinapaka nandritra ny Kônsily natao tao amin' ny tananan' i Nikea tamin' ny taona 325 izay notovanana nandritra ny Kônsily voalohany tao Kônstantinôpôly tamin' ny taona 381 ka indraindray izy dia atao hoe Fanekem-pinoan' i Nikea-Kônstantinôpôly na Fanekem-pinoana nikeana-kônstantinôpôlitana. Mizara fehezan-kevitra telo izy dia ny finoana an' Andriamanitra Ray sy ny finoana an' i Jesoa Kristy ary ny finoana ny Fanahy Masina ary taty aoriana dia natsofoka ny amin'ny finoana ny Fiangonana masina.
Σύμβολον τῆς Νικαίας / Súmbolon tês Nikaías na Σύμβολον τῆς πίστεως / Súmbolon tês písteôs no anaran' ilay fanekem-pinoana amin' ny teny grika fa Symbolum Nicaenum kosa amin' ny teny latina. Maro amin' ireo fiangonana niforona taty aoriana no tsy mampiasa io fiekem-pinoana io noho izy ireo manohitra ny Trinite.
Manamafy ny maha Zanak' Andriamanitra sy ny maha Andriamanitra an' i Jesoa Kristy io fanekam-pinoana io. Hamafisiny koa ny maha Andriamanitra ny Fanahy Masina nefa tsy Andriamanitra maro izany fa Andriamanitra tokana. Izany dia entina hamaritra ny finoana ny maha Telo Izay Iray na Trinite an' Andriamanitra.
Ny Ôrtôdôksa sy ny Katôlika ary ny ankamaroan' ny fiangonana prôtestanta na ireo fiangonana nipoitra avy aminy dia manaiky sy mampiasa io fanekem-pinoana io. Nisy fiovany izy taty aoriana tamin' ny nampidiran' ny Fiangonana Tandrefana ny hevitra hoe "nivoaka tamin' ny Zanaka koa ny Fanahy Masina" izay nomena ny anarana latina hoe Filioque (grika: καὶ τοῦ Υἱοῦ / kaὶ toū Uioū).
Ireo fiangonana tsy mino ny Trinite toa ny Fiangonan' i Jerosalema Vaovao sy ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany  ary ny Vavolombelon' i Jehovah dia tsy manaiky ny filazana sasany ao amin' io fiekem-pinoana io.
1 Fanekem-pinoana tao Nikea sy ny fanovana natao tao Kônstantinôpôly
1.1 Fanekem-pinoana tapaka tao Nikea
1.2 Fanekem-pinoana notovanana tao Kônstantinôpôly
2 Ny fanekem-pinoana nikeana isam-piangonana
2.1 Ny fanekem-pinoana nikeana ao amin'ny Fiangonana tatsinanana
2.2 Ny fanekem-pinoana nikeana ao amin' ny Fiangonana tandrefana
2.3 Fanekem-pinoana nikeana amin' ny Fiangonana armeniana
3 Fanekem-pinoana nikeana amin' ny fiangonana eto Madagasikara
3.1 Fiekem-pinoana niseana ao amin' ny Fiangonana katôlika
3.2 Fanekem-pinoana nikeana ao amin' ny Fiangonana loterana
3.3 Fanekem-pinoana nikeana-kônstantinôpôlitana ao amin' ny FJKM
3.4 Fiekem-pinoana nikeana ampiasain' ny FFKM
Fanekem-pinoana tao Nikea sy ny fanovana natao tao KônstantinôpôlyHanova
Fanekem-pinoana tapaka tao NikeaHanova
Ity ilay fanekem-pinoana nikeana voalohany tamin' ny Kônsily tao Nikea tamin' ny taona 325 . Tsy ny hoe izaho fa ny hoe izahay no mpisolo tena ilazana ny mpino tamin'io.
"Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν·
Τοὺς δὲ λέγοντας Ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, καὶ Πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν, καὶ ὅτι Ἐξ οὐκ ὄντων εγένετο, ἢ Ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσιάς φάσκοντας εἶναι ἢ κτιστόν ἢ τρεπτόν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τούτους ἀναθεματίζει ἡ ἁγία καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία".
Fanekem-pinoana notovanana tao KônstantinôpôlyHanova
Izao ilay fanekem-pinoana nikeana araka ny Kônsily tao Kônstantinôpôly tamin' ny taona 381. Nitazona azy io mandraka ankehitriny ny Fiangonana Tatsinanana indrindra ny Fiangonana ôrtôdôksa izay tsy nanaiky ny fanatsofohana ny Filioque ("sy ny Zanaka"). Tsy hita ao koa ilay filazana hoe "Andriamanitra avy amin' Andriamanitra" (grika: Θεὸν ἐκ Θεοῦ / Theòn ek Theoū; latina: Deum de Deu) izay tao amin' ilay Fanekem-pinoana nikeana tamin' ny taona 325, nefa ilay filazana hoe "Andriamanitra marina avy amin' Andriamanitra marina" (grika: θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ / Theòn alêthinòn ek Theoū alêthinoū; latina: Deum verum de Deo vero) dia voatazona ihany.
"Πιστεύομεν εἰς ἕνα θεὸν πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων·
καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν·
εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν. ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν, καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. ἀμήν."
Ny fanekem-pinoana nikeana isam-piangonanaHanova
Ny fanekem-pinoana nikeana ao amin'ny Fiangonana tatsinananaHanova
Mitovy amin' ny lahatsoratra fototry ny Fanekem-pinoan' i Nikea-Kônstantinôpôly izy ity saingy tsy mampiasa ny matoanteny mifandraika amin' ny hoe izahay fa amin' ny hoe izaho sady tsy ahitana ny hoe "avy amin' ny Zanaka" (Filioque) sy ny hoe "Andriamanitra avy amin' Andriamanitra" (Deum de Deo) izay hita ao amin' ny an' ny Fiangonana tandrefana. Maro ihany anefa ireo fiangonana mbola mampiasa matoanteny mifandraika amin' ny mpisolo tena milaza maro hoe: izahay.
"Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν"  .
Ny fanekem-pinoana nikeana ao amin' ny Fiangonana tandrefanaHanova
Ny Fanekem-pinoana nikeana dia nisy tovana natao taty aoriana ka nampidirin'ny Fiangonana tandrefana miteny latina ny teny hoe "sy tamin' ny Zanaka" (grika: καὶ τοῦ Υἱοῦ / kai tou Uiou; latina: Filioque) izay nanova ny tokony hinoana momba ny fifandraisan' ny Fanahy Masina sy ny Zanaka ka lasa mivoaka avy amin' ny Ray sy ny Zanaka ny Fanahy Masina. Naverina tao indray ilay filazana hoe "Andriamanitra avy amin' Andriamanitra" izay tao amin' ny endrik' ilay Fanekem-pinoana nikeana voalohany (taona 325). Isan' ny zavatra nampisaraka ny Fiangonana tatsinanana tamin' ny Fiangonana tandrefana izany taty aoriana. Tsy nanaiky ny fampidirana ny Filioque ny Fiangonana tatsinanana, dia ireo Fiangonana ôrtôdôksa. Ireo mpanavao fiangonana prôtestanta nipoitra tamin' ny Fiangonana tandrefana dia nanaraka io fanekem-pinoana nikeana tandrefana io koa.
"Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factόrem cæli et terræ, visibílium όmnium, et invisibílium.
Et in Spíritum Sanctum, Dόminum, et vivificántem : qui ex Patre Filiόque procédit. Qui cum Patre, et Filio simul adorátur, et conglorificátur : qui locútus est per Prophétas.
Et unam, sanctam, cathόlicam et apostόlicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiόnem peccatόrum. Et expécto resurrectiόnem mortuόrum. Et vitam ventúri sǽculi. Amen."
Fanekem-pinoana nikeana amin' ny Fiangonana armenianaHanova
Tsy hita ao amin' ny fanekem-pinoana nikeana amin' ny Fiangonana armeniana ilay filazana ny amin' ny fivoahan' ny Fanahy Masina avy amin' ny Zanaka (Filioque) sady misy tovana tsy hita ao amin' ny Fiekem-pinoana nikeana amin' ny endriny faharoa. Misy zavatra voalaza ao amin' ny Fiekem-pinoana nikeana voalohany izay naverina ao toy ny amin' ny fanamelohan' ny Fiangonana ireo milaza fa noforonina sns ny Zanaka. Izao ny dikan-teny malagasy mifandraika amin' izany.
"Izaho mino an’Andriamanitra Tokana, Ray tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita.
Sy Tompo tokana, dia i Jesosy Kristy, Zanak'Andriamanitra, Zanaka lahy tokana naterak'Andriamanitra Ray, izany hoe avy amin'ny maha-izy ny Ray, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka fa tsy noforonina; izay mitovy fomba amin'ny Ray, izay nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany na ny hita na ny tsy hita; izay nidina avy any an-danitra ho antsika olombelona sy ho fanavotana antsika ka tonga nofo, tonga olombelona, naterak'i Maria Virijiny masina tokoa, tamin'ny alalan'ny asan'ny Fanahy Masina ka nandray vatana sy aina sy fanahy ary izay rehetra ao amin'ny olombelona, marina tokoa fa tsy sary an-tsaina, niaritra ny fijaliana izy, nohomboana tamin'ny hazo fijaliana, nalevina; nitsangan-ko velona tamin'ny andro fahatelo; niakatra ho any an-danitra niaraka amin'ny vatany tsy niova, nipetraka eo ankavanan'ny Ray. Ho avy izy miaraka amin'ny vatany tsy niova sy amim-boninahitry ny Ray, hitsara ny velona sy ny maty, ary ny fanapahany tsy hanam-pahataperana.
Mino ny Fanahy Masina tsy noforonina sy tonga lafatra koa izahay, izay niteny tamin'y alalan'ny Lalàna sy ny mpaminany ary ny Filazantsara, izay nidina teo amin'ny ony Jordana, nitory teny tamin'ny alalan'ny Apostoly ary nonina tao amin'ireo olomasina.
Mino ny Fiangonana tokana masina, manerana izao tontolo izao sy apostolika, ny batisa, ny fibebahana, ny fanavotana ary ny famelam-pahotana. Ny fitsanganan'ny maty ho velona, ny fitsarana mandrakizay ny fanahy sy ny vatana, ny Fanjakan'ny Lanitra ary ny fiainanana mandrakizay.
Izay rehetra miteny hoe: "nisy fotoana tsy nisian'ny Zanaka, na nisy fotoana tsy nisian'ny Fanahy Masina", na raha miteny izy ireo hoe "ny Zanaka'Andriamanitra sy ny Fanahy Masina dia nisy avy tamin'ny tsy misy, na manana ny maha-izy azy hafa sady andairan'ny fiovaovana na ny fiovana", dia manozom-panamelohana azy ny Fiangonana manerana izao tontolo izao sy apostolika."
Fanekem-pinoana nikeana amin' ny fiangonana eto MadagasikaraHanova
Toy ny fiangonana kristiana rehetra maneran-tany dia tsy ny fiangonana rehetra eto Madagasikara no mampiasa io fiekem-pinoana io. Ny Fiekem-pinoana nikeana an' ny Fiangonana katôlika sy ny an' ireo Fiangonana protestanta eto Madagasikara (izay samy isan' ny Fiangonana tandrefana) dia tsy samy hafa afa-tsy ny momba ny fanagasiana sy ny fandikana amin' ny teny malagasy izay samy manana ny azy. Ny Katôlika sy ny Fiangonan' i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) mampiasa ny anarana hoe "Jesoa" nefa ny Loterana (FLM) mampiasa ny hoe "Jesosy". Ny Katôlika mampiasa ny hoe "fiangonana ... katôlika" fa ny Prôtestanta (FLM sy FJKM) dia manao hoe "fiangonana ... manerana izao tontolo izao". Ny Fiangonana ôrtôdôksa dia manaraka ny an' ny Fiangonana ôrtôdôksa maneran-tany izay tsy ahitana ny hoe "sy ny Zanaka" (Filioque). Samy mamerimberina ny hoe "Izaho mino" izy ireo, afa-tsy ny FJKM izay mampiasa ny hoe "Izahay mino".
Fiekem-pinoana niseana ao amin' ny Fiangonana katôlikaHanova
"Izaho mino an'Andriamanitra tokana, Ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita maso na ny tsy hita.
Izaho mino an'i Jesoa Kristy Tompo tokana, Zanaka lahi­tokan'Andriamanitra, teraky ny Ray talohan'ny taona rehetra: Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, Fahazavana avy amin'ny Fahazavana, Andriamanitra marina avy amin' Andriamanitra marina; nateraka Izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny Ray, ary Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjena antsika no nidinany avy any an-danitra. Ary naka nofo tamin'i Maria Virjiny Izy, noho ny herin'ny Fanahy Masina, ka tonga olombelona; nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray koa, tamin'ny andron'i Pôntsy Pilaty, nijaly ary nalevina ; nitsangan-ko velona tamin'ny andro fahatelo, araka ny voalazan'ny Soratra Masina, niakatra any an-danitra dia mipetraka eo an-kavanan'ny Ray; mbola ho avy amim-boninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany.
Izaho mino ny Fanahy Masina, Tompo Loharanon'aina, avy amin'ny Ray sy ny Zanaka; tsaohina sy omem-boninahitra miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka, ary niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany.
Izaho mino ny Eglizy, iray, masina, katôlika, apôstôlika. Izaho mankatò ny batemy tokana ho fanalana ny fahotana. Ary izaho miandry ny hitsanganan'ny maty sy ny fiainan-ko avy. Amen."
Fanekem-pinoana nikeana ao amin' ny Fiangonana loteranaHanova
Izaho mino an’i Jesosy Kristy Tompo Tokana, Zanak’Andriamanitra Lahitokana; nateraky ny Ray talohan’ ny fotoana rehetra; Andriamanitra avy amin’Andriamanitra; fahazavana avy amin’ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin’Andriamanitra marina; nateraka fa tsy noharina; miray Sobstansa (Izy maha-Izy Azy) amin’ny Ray; amin’ ny alalany no nahariana ny zavatra rehetra. Noho isika olombelona sy ny famonjena antsika no nidinany avy any an-danitra, ary tonga nofo notorontoronin’ny Fanahy Masina tao an-kibon’ i Maria virijina ka natao olombelona; nohomboana tamin’ny hazo fijaliana koa hisolo antsika fony nanapaka Pontio Pilato; nijaly ary nalevina; ary nitsangana indray tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina; niakatra ho any an-danitra; mipetraka eo ankavanan’ny Ray, ary ho avy indray amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany.
Izaho mino ny Fanahy Masina, Izay Tompo sady Mpamelona; Izay avy amin’ny Ray sy ny Zanaka; Izay itsaohana sy omem-boninahitra miaraka amin’ny Ray sy ny Zanaka; Izay niteny tamin’ny alàlan’ny mpaminany.
Izaho mino ny Fiangonana tokana, masina, apostolika, manerana izao tontolo izao. Izaho manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, ary miandry ny fitsanganan’ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Amena."
Fanekem-pinoana nikeana-kônstantinôpôlitana ao amin' ny FJKMHanova
"Isika mino an'Andriamanitra Iray, Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an'i Jesoa Kristy Tompo Iray, Zananilahy Tokan'Andriamanitra nateraky ny Rainy talohan'izao rehetra izao, ny Mazava avy amin'ny Mazava. Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao, miray amin'ny Ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao. Noho ny amintsika olombelona sady ho famonjena antsika dia nidina avy tany an-danitra Izy, ary nataon'ny Fanahy Masina nofo avy tamin'i Maria Virijiny, dia tonga olona Izy. Nohomboana tamin'ny hazofijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahan'i Pontio Pilato Izy; nijaly Izy ka nalevina. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra Izy. Niakatra ho any an-danitra Izy, ary mipetraka ao an-tànana ankavanan'ny Ray; avy any no hiaviany indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny Fanjakany. Isika mino ny Fanahy Masina, Tompo sady mpanome aina. Izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka ka itsaohana sy ankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka; Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino ny Fiangonana Iray, miorina amin'ny fanambaran'ny Apostoly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsangan'ny maty ary nyy fiainana mandrakizay. Amena".
Fiekem-pinoana nikeana ampiasain' ny FFKMHanova
"Izaho mino an'Andriamanitra tokana, Ray Tsitoha, nahary ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita.
Izaho mino an'i Jesoa-Kristy Tompo tokana, Zanaka Lahitokan'Andriamanitra, teraky ny Ray talohan'izao rehetra izao, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, Fahazavana avy amin'ny Fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka fa tsy natao, iray fomba amin'ny Ray.
Izy no nahariana izao rehetra izao, nidina avy any an-danitra ho antsika olombelona sy ho famonjena antsika, ary tonga nofo tao amin'i Maria Virijina noho ny herin'ny Fanahy Masina, ka tonga olombelona nohomboana tamin'ny hazofijaliana ho antsika tamin'ny andron'i Pontio Pilato, nijaly ary nalevina, nitsangana velona tamin'ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina niakatra any an-danitra, mipetraka eo an-kavanan'ny Ray ary ho avy indray amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty ka tsy hanam-pahataperana ny Fanjakany.
Izaho mino ny Fanahy Masina Tompo sy Mpamelona avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, itsaohana sy omem-boninahitra miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka, ary niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany.
Izaho mino ny Fiangonana iray, Masina, manerana izao rehetra izao, araka ny fanorenan'ny Apostoly.
Izaho manaiky ny Batisa iray ho famelan-keloka, ary miandry ny fitsanganan'ny maty sy ny fiainana ho avy. Amena."
↑ Early Church Texts, The Creed of Nicaea [tahiry].
↑ Dikan-teny malagasy: "Mino an’Andriamanitra Ray tokana tsitoha isika, izay mpamorona ny zava-drehetra na ny hita na ny tsy hita. Sy ny Tompo Jesosy Kristy tokana, Zanaka Lahitokan'Andriamanitra, nateraky ny Ray, izany hoe avy amin’ny sobstansan'ny Ray, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina; nateraka fa tsy natao, miray sobstansa amin’ny Ray, amin’ny alalany no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany; ka ho antsika olombelona sy ho an’ny famonjena antsika no nidinany ho tonga nofo sy tonga olombelona; nijaly, nitsangan-ko velona tamin’ny andro fahatelo, niakatra any an-danitra, ary ho avy indray hitsara ny velona sy ny maty. Ary ny Fanahy Masina. Izay rehetra miteny hoe: "nisy fotoana tsy nampisy azy: tsy nisy izy talohan'ny nahaterahany; natao mitovy amin'ny zavatra avy amin’ny tsy misy izy; sobstansa sy maha-izy-azy hafa izy, noarîna izy; mety miova sy mety iharan'ny fiovana ny Zanak'Adriamanitra", dia manozom-panamelohana azy ny Fiangonana eran’izao tontolo izao sy apostolika."
↑ Definition de la foi du concile à Chalcédoine, quatrième œcuménique [archive]
↑ Dikan-teny malagasy: "Isika mino an’Andriamanitra Tokana, Ray tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Sy an’i Jesosy Kristy Tompo Tokana, Zanak’Andriamanitra Lahitokana; nateraky ny Ray talohan’ ny fotoana rehetra; fahazavana avy amin’ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin’Andriamanitra marina; nateraka fa tsy noarina; miray sobstansa amin’ny Ray; amin’ny alalany no nahariana ny zavatra rehetra. Noho isika olombelona sy ny famonjena antsika no nidinany avy any an-danitra, ary tonga nofo notorontoronin’ny Fanahy Masina tao an-kibon’ i Maria virijina ka natao olombelona; nohomboana tamin’ny hazo fijaliana koa hisolo antsika fony nanapaka Pontio Pilato; nijaly ary nalevina; ary nitsangana indray tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina; niakatra ho any an-danitra; mipetraka eo ankavanan’ny Ray, ary ho avy indray amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany. Sy ny Fanahy Masina, Izay Tompo sady Mpamelona; Izay avy amin’ny Ray; Izay itsaohana sy omem-boninahitra miaraka amin’ny Ray sy ny Zanaka; Izay niteny tamin’ny alàlan’ny mpaminany; Ary mino koa ny Fiangonana tokana, masina, apostolika, manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, ary miandry ny fitsanganan’ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Amena."
↑ Ἠ Θεία Λειτουργία, Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως [archive]
↑ Dikan-teny malagasy: "Izaho mino an’Andriamanitra Tokana, Ray tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Sy an’i Jesosy Kristy Tompo Tokana, Zanak’Andriamanitra Lahitokana; nateraky ny Ray talohan’ ny fotoana rehetra; fahazavana avy amin’ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin’Andriamanitra marina; nateraka fa tsy noharina; miray sobstansa amin’ny Ray; amin’ ny alalany no nahariana ny zavatra rehetra. Noho isika olombelona sy ny famonjena antsika no nidinany avy any an-danitra, ary tonga nofo notorontoronin’ny Fanahy Masina tao an-kibon’ i Maria virijina ka natao olombelona; nohomboana tamin’ny hazo fijaliana koa hisolo antsika fony nanapaka Pontio Pilato; nijaly ary nalevina; ary nitsangana indray tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina; niakatra ho any an-danitra; mipetraka eo ankavanan’ny Ray, ary ho avy indray amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany. Sy ny Fanahy Masina, Izay Tompo sady Mpamelona; Izay avy amin’ny Ray; Izay itsaohana sy omem-boninahitra miaraka amin’ny Ray sy ny Zanaka; Izay niteny tamin’ny alàlan’ny mpaminany; Ary koa ny Fiangonana tokana, masina, apostolika, manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, ary miandry ny fitsanganan’ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Amena."
↑ Dikan-teny malagasy: "Izaho mino an’Andriamanitra Tokana, Ray tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Sy an’i Jesosy Kristy Tompo Tokana, Zanak’Andriamanitra Lahitokana; nateraky ny Ray talohan’ ny fotoana rehetra; Andriamanitra avy amin’Andriamanitra; fahazavana avy amin’ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin’Andriamanitra marina; nateraka fa tsy noharina; miray Sobstansa amin’ny Ray; amin’ ny alalany no nahariana ny zavatra rehetra. Noho isika olombelona sy ny famonjena antsika no nidinany avy any an-danitra, ary tonga nofo notorontoronin’ny Fanahy Masina tao an-kibon’ i Maria virijina ka natao olombelona; nohomboana tamin’ny hazo fijaliana koa hisolo antsika fony nanapaka Pontio Pilato; nijaly ary nalevina; ary nitsangana indray tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina; niakatra ho any an-danitra; mipetraka eo ankavanan’ny Ray, ary ho avy indray amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany. Sy ny Fanahy Masina, Izay Tompo sady Mpamelona; Izay avy amin’ny Ray sy ny Zanaka; Izay itsaohana sy omem-boninahitra miaraka amin’ny Ray sy ny Zanaka; Izay niteny tamin’ny alàlan’ny mpaminany. Ary ny Fiangonana tokana, masina, apostolika, manerana izao tontolo izao. Izaho manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, ary miandry ny fitsanganan’ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Amena."
↑ Araka izay ampiasain'ny Fiangonana katolika eto Madagasikara
↑ Araka izay ampiasain'ny Fiangonana Loterana Malagasy
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanekem-pinoana_nikeana&oldid=1027820"
Dernière modification le 14 Aogositra 2021, à 10:57
Voaova farany tamin'ny 14 Aogositra 2021 amin'ny 10:57 ity pejy ity.